Iimfihlakalo zangoLwesine Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
El irosari engcwele ibingumthandazo wesintu wamaKatolika kangangeenkulungwane. Ngaye neemfihlakalo zakhe, sinethemba lokufumana kwiNtombikazi enguMariya, unina wonyana kaThixo, ubabalo nentsikelelo yakhe. Jonga nathi Iimfihlakalo zangoLwesine, ukuze, ngomthandazo, ukwazi ukunxibelelana nenenekazi lethu elikhulu kwaye ufunde okungakumbi ngoYesu, unyana kaThixo.
1 Iimfihlakalo zangoLwesine
1.1 Imfihlakalo yokuqala ekhanyayo: Ubhaptizo eYordan
1.2 Imfihlakalo yesibini ekhanyayo: Umtshato eKhana
1.3 Imfihlakalo yesithathu ekhanyayo: Isibhengezo soBukumkani bukaThixo
1.4 Imfihlakalo yesine ekhanyayo: Ukwenziwa kumila kumbi
1.5 Imfihlakalo yesihlanu ekhanyayo: Iziko le-Ekaristi
1.5.1 Iincwadi zeNtombikazi (Isichotho)
2 Intsingiselo yeemfihlakalo zerosari
3 Ezinye iimfihlakalo zerosari engcwele
Iimfihlakalo zerosari engcwele ehambelana nangoLwesine zezi Iimfihlakalo ezikhanyayo. Okulandelayo, sikubonisa iimfihlakalo nendlela thandaza irosari engcwele ngokufutshane:
Qala ngokuzinqumla, emva koko uqhubeke nge nyota.
Oku kulandelayo, makukhankanywe imfihlelo. Nje ukuba imfihlakalo ikhankanywe kunye nokucamngca okanye into ekuyiyo kuthethwe ngayo, a Utata wethu, ishumi Dumisa uMarys kwaye kwakhona kwakhona nyota.
Ukuba unayo irosari ngesandla, gcinani engqondweni ukuba indawo nganye enkulu imele imfihlakalo kwaye kukho umgama ezilishumi phakathi komnye. Ezo zilishumi zimele Dumisa uMarys Kwaye babizwa ngokuba "ngamashumi." Emva kweshumi ngalinye, utsho u nyota kwaye ungongeza ukubongoza okanye ukuchama.
Ekupheleni kweRosari, Litany Lauretana okanye nayiphi na enye imithandazo yemarian.
Sele siyitshilo loo nto, siyaqhubeka kunye Iimfihlakalo ezikhanyayo, ehambelana nangoLwesine:
Imfihlakalo yokuqala ekhanyayo: Ubhaptizo eYordan
Ukucamngca: Wabhaptiza uYesu, emva koko waphuma emanzini; kwaye koku amazulu avuleka waza wabona umoya kaThixo usihla unjengehobe usiza phezu kwakhe. Ilizwi eliphuma emazulwini lathi: «Lo nguNyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye«. ( Mateyu 3, 16-17 )
Emva kwekhefu elifutshane, a UPadre Nuestro, ishumi Dumisa uMarys kunye nyota.
Imfihlakalo yesibini ekhanyayo: Umtshato eKhana
UkucamngcaEmva kweentsuku ezintathu kwabhiyozelwa umsitho eKana yelaseGalili. Unina kaYesu wayelapho. Wamenyelwa noYesu ke emtshatweni kunye nabafundi bakhe. Yakuphela iwayini, ngenxa yokuba iwayini yomtshato yayiphelile, unina wathi kuYesu: «Abanawayini«. UYesu uphendula athi: «Ndinantoni nawe mfazi? Alikafiki ixesha lam«. Unina uthi kubakhonzi: «Yenza le nto akuxelela yona«. (Yoh 2, 1-5)
Imfihlakalo yesithathu ekhanyayo: Isibhengezo soBukumkani bukaThixo
Ukucamngca: «Ixesha liphelile kwaye uBukumkani bukaThixo bukufuphi; Guqula kwaye ukholelwe iindaba ezilungileyo«. (UMk 1, 15)
Imfihlakalo yesine ekhanyayo: Ukwenziwa kumila kumbi
Ukucamngca: Kwiintsuku ezintandathu kamva, uYesu wathabatha uPetros, uYakobi nomntakwabo uYohane, wabathabatha waya nabo entabeni ephakamileyo. Wenziwa waba kumila kumbi phambi kwabo, ubuso bakhe babengezela ilanga zaza iingubo zabo zamhlophe njengokukhanya. (Mt 17, 1-2)
Imfihlakalo yesihlanu ekhanyayo: Iziko le-Ekaristi
Ukucamngca: Xa babesitya, uYesu wathabatha isonka, wasisikelela, wasiqhekeza, wanika abafundi bakhe, wathi: «Thatha, utye, ngumzimba wam lo ». ( Mateyu 26, 26 )
Emva kwekhefu elifutshane, a UPadre Nuestro, ishumi Dumisa uMarys kunye nyota. Iphela nge-litan yaseMarian, ebonakalayo ngezantsi.
Iincwadi zeNtombikazi (Isichotho)
Sikubiza ngokuba ngoonyana bakaEva abathinjiweyo; kuwe siyancwina kwaye siyalila kule ntlambo yeenyembezi. Yiza, ke, Nenekazi, ummeli wethu, buyela kuthi loo mehlo akho anenceba, kwaye, emva kokudingiswa, sibonise uYesu, isiqhamo esisikelelweyo sesibeleko sakho. Oo kakhulu clement, oh abangcwele, okanye sweet Virgin Mary! Sithandazele, Mama oyiNgcwele kaThixo, ukuba sizenze sikulungele ukufikelela kwizithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu. Amen.
Intsingiselo yeemfihlakalo zerosari
Kwirosari engcwele sifumana igama elithi "imfihlakalo", nokucamngca, iinkcazo ezivela eBhayibhileni ezisixelela ngeNkosi yethu uYesu Krestu. Ukuba siya kwisichazi-magama seRoyal Spanish Academy (RAE) kwaye sijonge intsingiselo yegama elithi «imfihlakalo», sifumanisa ukuba enye yeentsingiselo zayo yile ilandelayo:
"Nganye yamanyathelo ebomini, inkanuko kunye nokufa kukaYesu Krestu, xa kuthathelwa ingqalelo ngokwahlukileyo."
Oku kuthetha ukuba iimfihlakalo esizifumana ngaphakathi irosari bangoYesu ngokwakhe. Kungenxa yokuba, ebuntwini, kunzima ukuqonda ukuba anganguThixo nomntu ngexesha elinye.
Kwakhona, enkosi kule nkcazo, sinokuqonda ukuba, ngokwenene, imalunga neenxalenye zobomi bukaYesu, ukusuka ekuzalweni kwakhe, kwimimangaliso yakhe, kude kube sekufeni kwakhe emnqamlezweni.
Ukuba uzinikele, unengxaki yokugula okanye ukungonwabi kwaye unqwenela ukuthandazela ukuphiliswa kwirosari engcwele, unokuba nomdla wokwazi ngayo. ukuphilisa irosari ngokwasemoyeni, ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni.
Ezinye iimfihlakalo zerosari engcwele
Njengoko bekutshiwo, imfihlakalo nganye ibonisa indawo yobomi kunye nomsebenzi weNkosi yethu uYesu Krestu, unyana kaThixo kunye neNtombi Enyulu uMariya, ukususela ekuzalweni kwakhe kuye ekufeni kwakhe. Ngokupheleleyo, irosari engcwele yaqokelela iimfihlakalo ezili-15, kodwa uSanta uJohn Paul II, ozinikele kakhulu kwirosari engcwele, wongeza iimfihlakalo zokukhanya okanye ezikhanyayo, ezizizo sijongana nazo apha, ezinika iimfihlakalo ezingama-20 zizonke. .
Okulandelayo, kuchazwa ngokufutshane ukuba imfihlelo nganye inantoni na kwaye bathandaza ngaluphi usuku:
Iimfihlakalo zoLonwabo okanye uvuyo: zibalisa ngokusasazwa kweNgelosi eyintloko uGabriyeli ukuya kwiNtombi Enyulu kwaye bahamba ebuntwaneni bukaYesu. (NgoMvulo nangoMgqibelo).
Iimfihlakalo eziLusizi: babalisa inkanuko nokufa kukaYesu emnqamlezweni. (NgoLwesibini nangoLwesihlanu).
Zukisiwe: ukusuka ekuvukeni nasekunyukeni kukaYesu, ukuza koMoya oyiNgcwele kunye nokuthathwa kweNtombikazi kunye nokubekwa kwakhe ezulwini. (NgoLwesithathu nangeCawa).
Ezikhanyayo (ezi kuxoxwe ngazo apha): le yokugqibela igqibezela indlela yokuhlengwa. Aba bacinga ngokubhaptizwa kukaYesu, umtshato waseKana, ukwenziwa kumila kumbi kwaye ekugqibeleni, imfihlelo enkulu yeziko le-Ekaristi.
Siyathemba ukuba irosari engcwele izisa uxolo, ukuphilisa, ubulumko kunye nokunxibelelana okuphezulu neNkosi yethu uYesu Krestu kwaye ufunde okuninzi ngobomi bakhe, ukuthanda kwakhe, ukufa kwakhe kunye nokukhululwa kwakhe.